MR MRT: အနှစ် ရအောင် ယူပါလေ (ပဒံမြေ ဖြူစင်မေတ္တာ)
အနှစ် ရအောင် ယူပါလေ (ပဒံမြေ ဖြူစင်မေတ္တာ)
၁။ ရှိခိုးပူဇော်၊ ဆည်းကပ်သော်၊ ဂုဏ်တော် ထင်ပါစေ။
၂။ ပညာရေးစုံ၊ ဘွဲ့တွေစုံ၊ ဆင်ခြင်တုံလည်း ရပါစေ။
၃။ သူ၏အကျိုး၊ ရွက်သည်ပိုး၊ ဗြဟ္မစိုရ်မိုး ရွာနိုင်စေ။
အထူးသဖြင့် ပရဟိတ အနှစ်ရဖို့ အခြေခံရမှာက ကရုဏာ ဗြဟ္မစိုရ်။
မဟာကာရုဏိကော နာထော၊ ဟိတာယ သဗ္ဗပါဏီနံ။
ပူရေတွာ ပါရမီ သဗ္ဗ၊ ပတ္တော သမ္ဗောဓိ မုတ္တမံ။
နောက်တစ်ခုက . . .
ပရဟိတ အနှစ်ရအောင် ပရဟိတသမားတွေ သိထားသင့်တဲ့ အင်တာနေရှင်နယ် စံလေးတွေ
၁။ Acceptance - အရှိအမှန်ကို လက်ခံနိုင်ရမယ်။
ပရဟိတ လုပ်ကြပြီဆိုတော့ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတာတွေ၊ ခက်ခဲတာတွေ၊ ပြဿနာတွေကို အရှိအတိုင်း လက်ခံရတယ်။ ပစ်ပယ်လို့ မရဘူး။ အပြစ်မတင်ရဘူး။
၂။ Individualization - ကူညီရမယ့်လူကို တစ်သီးပုဂ္ဂလ အဖြစ် မြင်ပါ။ အစုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မမြင်ပါနဲ့။ ဘာသာရေး အဖွဲ့ဝင်၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ဝင်။ အဖွဲ့ဝင် တစ်ခုခုအဖြစ် မမြင်ပါနဲ့။
၃။ Self-determination - ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက် ချပါ။ ကူညီတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံရေး တွန်းအား၊ ဘာသာရေးတွန်းအား။ တွန်းအားတစ်စုံရာကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။
၄။ Non-judgemental attitude - ခွဲခြားဆုံးဖြတ်တာမျိုး မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ကူညီရမယ့်သူက လူကောင်းလား လူဆိုးလား။ ဆင်းရဲသလား ချမ်းသာသလား ဘယ်လိုခွဲခြားမှုမျိုးမှ မထားဘဲ တပြေးညီ ကူညီပါ။
၅။ Confidentiality - လျှို့ဝက်စရာရှိတာ လျှို့ဝှက်ပေးထားရမယ်။ ကိုယ်ကူညီလိုက်တဲ့သူရဲ့ ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာကို မသင့်တော်တဲ့နေရာမှာ ဖွင့်မချမိပါစေနဲ့။ သူမှာ ဘာရောဂါ ရှိတယ်၊ ဘာပြဿနာရှိတယ်။ သူသိက္ခာကျအောင် ဖွင့်မပြောမိပါစေနဲ့။
၆။ Friends and Family - ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပရဟိတ ဆောင်ရွက်ဖို့ လိုသလို မိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုကို ကူညီဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ အဖေပရဟိတ၊ အမေပရဟိတ၊ မိသားစု ပရဟိတ၊ အိမ်တွင်းပရဟိတ၊ သူငယ်ချင်း ပရဟိတ။ ဒါတွေလည်း မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့။
၇။ Satisfactory - လုပ်နိုင်တဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို ကျေနပ်ပါ။ မတတ်နိုင်သေးတဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို တွေးတောပြီး စိတ်မပူပါနဲ့။
ပဒံမြေ ဖြူစင်မေတ္တာ အောက်စီဂျင်အဖွဲ့
စတုတ္ထအကြိမ် ဓမ္မပူဇာသဘင် တတိယည အောင်ပွဲ ပြီး၏။
Posted by Ashin Acara. at 8:04 PM